Shenzhen Hofisi Yakagadzirwa
na admin pa 21-05-21
Nekukura kwemakore gumi nemana, isu, Yueqing Leyu Electric Automation Co., Ltd, tinowedzera nzvimbo yedu yekutengesa kune zvigadzirwa zve soalr, senge solar inverter, solar controller. Hofisi yedu muShenzhen, kune guta rine mukurumbira pakati pevatengi vekunze, ingori hafu yeawa kubva kuGuangzhou, yakamiswa pa ...
Mutengi wekuRussia akashanyira kambani yedu nezuro uye anofarira magetsi edu. Akatora mamwe masampuli kuti aongorore kunaka, ozoisa odha yakawanda. Tave tichigadzira magetsi kwemakore gumi nemana, uye isu tiri mutengesi wegoridhe paAlibaba, tine chivimbo mumhando yedu. Tinogamuchira a...
na admin pa 21-02-27
Vanodiwa Vatengi, Mushure menguva yakareba mutambo weChirimo, LEYU yadzokera kubasa nhasi (Feb.27th). Gamuchira kubvunza kwako nezve simba rekupa, magetsi inverter etc. Zvaunobvunza zvichapindurwa mukati maawa gumi nemaviri. Ndatenda. Leyu sales team
2021 Dzokorora Nguva Mushure meMutambo Wechirimo
Anodiwa Mutengi, Takafunga kutangazve basa mushure meMutambo wakareba weChirimo musi wa27 Kukadzi. Panguva iyoyo, unogona kunzwa wakasununguka kutibata nesu nezve maodha ako matsva. Nekuti vatengi vazhinji vakaisa odha pamberi pemutambo, fekitori yedu ichave yakabatikana zvakanyanya. Kana iwe uchida magetsi, magetsi inverter nezvimwe, ...
na admin pa 21-01-16
Anodiwa Mutengi, tiri kukuyeuchidza kuti mafekitori mazhinji muChina achamira kushanda panguva yeMutambo weChirimo. Mazororo eLeyu achatanga kubva musi wa4 Kukadzi kusvika 25, Kukadzi muna 2021. Sezvineiwo, maodha akawanda akasimbiswa pamberi pa20 Ndira, 2021 anogona kutumirwa zororo risati rasvika. Nekudaro, zvese ...
Simba Inverter 5000w, Solar Controller Charger, Simba Inverter, Variable Power Supply, mbiri inobuda simba rekupa, Solar Power Converter,